Dumbbell Triceps: Tilmaamaha iyo Jimicsiyada Ugu Fiican | Ragga Stylish
Dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan yeelano cudud weyn taasna waxaan aadeynaa qolka jimicsiga si aan uga shaqeyno jir dhiska. Si kastaba ha noqotee, dad badani ma oga in muruqa ugu weyn ee gacmuhu uusan aheyn biceps laakiin uu yahay triceps. Waligaa ma yeelan doontid addimo waaweyn, adadag haddii aadan si sax ah u weerarin saddexda madax ee saddexda qaybood. Waxaa jira siyaabo badan oo looga shaqeyn karo muruqan, dad badanna waxay doorbidaan inay shaqeeyaan murqaha. dumbbell triceps.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno waxa ay yihiin laylisyada ugu fiican ee lagu shaqeynayo triceps leh dumbbells iyo qaar ka mid ah talooyinka ugu badan
2 Jimicsiyada ugu fiican ee 'triceps' leh dumbbells
2.1 Dumbbell kordhinta taagan
2.2 Dumbbell Triceps: Kordhinta Bench Dumbbell
2.3 Saxaafadda Faransiiska ee Dumbbell
2.4 Dumbbell curls iyo xusullada furan
3 Siyaabo kale oo loogu shaqeeyo triceps
4 Dheeri kalori
Maskaxda ku hay inay muruq leedahay seddex madax oo ay tahay in si gooni ah oo wada jir ah looga shaqeeyo si wada jir ah loo helo natiijooyin wanaagsan. Waxaad ku wada shaqeyn kartaa labadaba miisaanka jidhkaaga, triceps oo leh dumbbells iyo biil. Waxaan ku siineynaa talooyin dhowr ah oo ku saabsan faa'iidooyinka u leh ka shaqeynta triceps-ka dumbbells.
Waana in ka shaqeynta muruqyadan iyadoo la adeegsanayo dumbbells ay faa'iidooyin u keeni karto horumarka kooxdan muruqyada ah. Tusaale ahaan, markaan ku shaqeyno triceps-ka dumbbells waxaan sixi karnaa dhibaatooyinka isku midka ah ee jirkeena. Xaqiiqdii, inbadan oo naga mid ah waxay leyihiin cudud ka horumarsan tan kale waana sahlan tahay in la koriyo. Iyada oo loo yaqaan 'dumbbells' waxaan u wada shaqeynaa si kali kali ah waxaanan ku guuleysaneynaa inaan wadno wadar kicinta qayb ka mid ah jirka oo aan muruqa ka dhigno mid si buuxda u shaqeynaya. Haddii aan ku shaqeyno baar, jirka intiisa kale way gaari kartaa magdhabo xoog yaraantaas muruqyada cudud gaar ah.
Guud ahaan, triceps-ka shaqeeya oo leh dumbbells waxay door bidaa dhaqdhaqaaqa kala duwan. Inta udhaxeysa safarka ama dhaqdhaqaaqa jimicsiga waa dhamaan meelaha aan dhaqaaqno inta aan jimicsiga sameyneyno. Iyada oo baararka aan sida caadiga ah aad ugu xaddidan nahay dhaqdhaqaaqan kala duwan. Aan aragno maxay yihiin laylisyada ugufiican ee lagu shaqeeyo triceps oo leh dumbbells.
Jimicsiyada ugu fiican ee 'triceps' leh dumbbells
Dumbbell kordhinta taagan
Waa jimicsi sababa gubasho kooxdan muruqyada ah si fudud. Uma baahnid inaad qaadatid miisaan aad u badan waana inaad ilaaliso in farsamadu sax tahay si looga fogaado dhaawacyada. Dhabarka waa inuu toosan yahay inta lagu gudajiro dhaqdhaqaaqa oo xudunta waa inay ahaato mid firfircoon. Sidan oo kale, waxaan hubineynaa in miisaan badan aan la saarin dhabarka hoose. Sidoo kale waa inaan ka taxaddarnaa markaan kor u qaadeyno dhagaha si uusan madaxayaga ugu dhicin.
Waxaa lagugula talinayaa inaad gacanta qabato si aad kor ugu qaaddo garabka leh cududeena kale si kor loogu qaado xasilloonida dhaqdhaqaaqa. Maskaxda ku hay in layligani aanu lahayn kor u kac xad dhaaf ah oo aad loo soo hadal qaado maaddaama aan ka shaqeyneyno xagal aan triceps aysan sameyn karin xoog badan. Maaddaama ay tahay jimicsi fidinta suxulka, way ka dhib badan tahay, triceps-ka ayaa qiyaasi kara hawsha si fudud, sida haddii ay tahay asal baar leh.
Dumbbell Triceps: Kordhinta Bench Dumbbell
Layligani waa mid lama huraan u ah horumarinta madaxa dheer ee triceps. Si tan loo sameeyo, waa inaad ku qabataa cidhiidhiga ka sarreeya madaxaaga labada gacmood oo aad kor iyo hoos u raacdaa adoo xusulladaada jilcinaya. Ka taxaddar kordhinta suxulka maxaa yeelay waxay keeni kartaa ilmo. Sida had iyo jeer, waa inaanu culeyska ku hagaajino heerkeenna.
Saxaafadda Faransiiska ee Dumbbell
In kasta oo layligani si wax ku ool ah loogu sameeyo baarka, haddana sidoo kale waxaa lagu samayn karaa dumbbells. Waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo qabasho dhexdhexaad ah dhaawac aad u badan ha u geysan qaybta xusulka. Dad badan ma doorbidaan layligan maaddaama qorista fibreerku aysan aad ugu fiicnayn daal. Maaddaama qaar badani daal la yeeshaan jimicsi si fiican loo qabtay, uma isticmaalaan layligan inay ku horumariyaan kooxdan muruqyada.
Dumbbell curls iyo xusullada furan
Tani waa hab lagu shaqeeyo triceps-ka oo leh dumbbells xagal kale. Waa tallaabo aad u wanaagsan in xoog lagu helo. Si loo sameeyo dhaawacyadan Waa inaad calooshaada ceshataa marwalba, dhabarkaaga toosan oo taxaddar dhaqdhaqaaqa dhaqaaqa.
Siyaabo kale oo loogu shaqeeyo triceps
Waxaa jira jimicsiyo badan oo aan ka shaqeynaynin saddexda qaybood dumbbells, laakiin waxay noqon karaan sida ama ka waxtar badan. Tusaale ahaan, markaan kashaqeyno laabtayada iyo Waxaan sameynaa joornaalka caadiga ah ee kursiga keydka waxaan u shaqeyn doonnaa qalabkayaga 'triceps' si aad u wanaagsan. Xaqiiqdii, layligan waxaa jira xaddidado kala duwan oo naga caawinaya inaan ogaanno qaybta muruqyada ee aan si fiican u horumarin. Haddii qaybta aan ka qaadno baarka xabadka ay naga qaaliso wax badan, waa in qeybahayagu aysan si wanaagsan u horumarin. Si kastaba ha noqotee, haddii qaybta noogu adag ay tahay xusulka ugu dambeeya ee kordhinta baarka, waa in triceps-keena aan si wanaagsan loo horumarin.
Iyadoo riixitaanka xiran waxaan sidoo kale shaqeyn karnaa kooxdan muruqyada, waa jimicsi aad u xiiso badan tan iyo markii aan la shaqeyn karno culeyskeena jirkeena oo aan loo baahnayn rakibid. Isla sidaas ayaa loo sameeyaa faleebada kursiga keydka ee 'triceps bench bench'
Ahaanshaha qaadashada kalooriga oo ka sarreysa tan la cunay waxaa loo yaqaan magaca dheeraadka kalooriga. Shuruudahayaga tamarta ee loogu talagalay dayactirka culeyska ayaa loo qaybiyaa kharashkeena dheef-shiid kiimikaadka ee ku baxa marka lagu daro dhaqdhaqaaqa jirka ee aan ku xirnayn jimicsiga Tan waa inaan ku darno dhaqdhaqaaqa jireed ee aan sameyno inta lagu jiro tababarka miisaanka iyo haddii aan sameyno wadnaha. Wadarta kalooriyada aan helno waa qaadashada ay tahay inaan cunno si aan u ilaalino culeyska. Haddii aan rabno inaan kasbano murqaha waa inaan ku kordhinaa cal sheeg 300-500 kcal, iyadoo kuxiran ujeedkeenna iyo heerkeenna. La'aantan siyaado ah ee kalooriyada ma sameyn karno koriimadeenna kore.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto sida loo shaqeeyo triceps-ka oo leh dumbbells.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Dumbbell triceps